Usebenza njani ngeMolality and Mole Fractions
Njengomahluko kumagama abo, umahluko osebenzayo phakathi Ubungakanani kwaye isandi ubuqili. Jonga ngononophelo iinkcazo zabo, ezichazwe ecaleni komnye kwezi zilandelayo:
Amanani ngokulinganayo ngokobuninzi kunye nobukhulu ziyafana, kodwa iidinomineyitha zahluke kakhulu. I-Molarity ijongana neelitha zesisombululo, ngelixa ubuninzi bujongana neekhilogram zesisombululo. A isisombululo ngumxube wesinyibilikisi kunye nesinyibilikisi; a inyibilikisi yindlela ekuxutywa ngayo isolute.
Iziphumo zobusi basebukhosini
Olunye uxinaniso kwisiphithiphithi / isiphithiphithi sokudideka yindlela yokwahlula phakathi kwezinto eziguquguqukayo kunye neeyunithi. Ukucacisa le plethora ye m -amagama kunye nezifinyezo, jonga itafile.
M Amagama ahambelana noThintelo
Ubungakanani M M
Isimbuku m m
Iinyama - Isol
Ngamaxesha athile, unokucelwa ukuba ubale i iqhezu iqhekeza yesisombululo, esisilinganiselo senani lee-moles ze nokuba yeyiphi nyibilikisa okanye usinyibilikise kwisisombululo kwinani lilonke leemmozi zesolute kwaye isisombululo kwisisombululo. Iikhemisti zichaze obu bungakanani zisebenzisa umahluko X. Ewe kunjalo, oosokhemesti kusafuneka bahlula phakathi kwamaqhekeza e-solute kunye nesinyibilikisi, ngelishwa bobabini baqala ngonobumba. s .
Ukuthintela ukudideka, bagqibe kwelokuba bashunqule isolute kunye nesinyibilikisi njengo-A kunye no-B, ngokwahlukeneyo kwifomula ngokubanzi. Ngokwenza oko, iifomula zeekhemikhali zesinyibilikisi kunye nesinyibilikisi zihlala zibhalwa njengemirhumo endaweni ka-A kunye no-B. Umzekelo, iqhezu le-mole chloride yesisombululo liya kubhalwa njenge X I-NaCl.
Ngokubanzi, umlinganiso we-mole kwisisombululo kwisisombululo uchazwa njenge
ipilisi eluhlaza mc 14
Phi n UKUYAlinani leemoleyuli zesolute kunye n Blinani le-moles yesinyibilikisi. Umlinganiselo we-mole solvent ke ngoko
Ipilisi yeorenji emalunga ne-100
La maqhekeza e-mole aluncedo kuba amele umyinge wesinyibilikisi kunye nesinyibilikisi kwisisombululo kakuhle kwaye ikunike ukuqonda ngokubanzi malunga nokuba isisombululo sisinyibilikisi esingakanani kwaye sisinyibilikisi esingakanani.
Apha ' Umzekelo: Zingaphi iigrama ze-dihydrogen sulfide (HMbiniS) kufuneka wongeze kwi-750 g yamanzi ukwenza i-0.35 m isisombululo?
Le ngxaki ikunika ukungunda kunye nobunzima besinyibilikisi kwaye ikucela ukuba usombulule ubunzima besinyibilikisi. Ngenxa yokuba i-molality ibandakanya i-moles kwaye ingeyiyo i-gram ye-solute, kufuneka uqale usombulule i-moles ye-solvent, emva koko usebenzise ubunzima begram ye-sodium chloride ukusombulula inani leegrama ze-solute.
Ngaphambi kokufaka amanani kwi-equality molation, kufuneka uqaphele ukuba ingxaki ikunike ubunzima be-solvent kwiigrama, kodwa ifomula ifuna ukuba ibe ziikhilogram. Ukuhamba ukusuka kwiigram ukuya kwiikhilogram kulingana nokuhambisa indawo yedesimali kwindawo ezintathu ngasekhohlo. Ukufaka yonke into oyaziyo kwi-equation ye-molality kukunika oku kulandelayo:
Ukusombulula into engaziwayo kukunika i-0.26 ye-HMbiniS kwisisombululo. Kuya kufuneka uliphindaphinde eli xabiso leemolekyuli ngobunzima beemolekyuli zikaHMbiniS ukumisela inani leegrama ekufuneka zongeziwe:
Ke, uyafuna 8.9 iigrama ze-dihydrogen sulfide (H Mbini S) ukwenza 0.35 m isisombululo.
ucofa njani ukukhanya kweswitshi
isetyenziselwa ntoni keflex
iintlungu phantsi kweembambo kwicala lasekunene
ngowuphi unyaka wamaJuda